Mila mitandrina amin’ny fiverenany - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Covid-Organics, îles Eparses : Patrick Rajoelina, le communicant des dossiers délicats à la rescousse il y a 8 jours
La diplomatie par les stades en Afrique à la sauce chinoise il y a 9 jours
Tosika natao ialana amin’ny fahantrana fa tsy natao hohanina hoy ny mpitantana ao amin’ny boriborintany fahaefatra il y a 9 jours
Airtel Madagascar au secours des Baobabs ! il y a 12 jours
Mila mitandrina amin’ny fiverenany
Efa tokony miomana amin’ny fiverenan’ny coronavirus isika dieny izao. Mbola misy ireo mitondra ny tsimok’aretina amin’izao fotoana izao eto amintsika. Mahery vaika ny fiverenany any ivelany any. Ary ny eto Madagasikara?
Maro ireo firenena any ivelany no miverina mihiboka indray amin’izao fotoana izao. Miakatra ny isan’ireo olona mitondra ny tsimok’aretina coronavirus miteraka ny aretina covid-19.
Raha ny marina tokony efa miomana amin’izany ihany koa isika. Tsy hiandry efa hidangana be ny isan’ireo voa vao hihetsika. Araka ny nambaran’ny Dr Fidy Bariniaina dia « tsara raha tazomina hatrany ireo fepetra isorohana ity aretina ity tsy hoavy. » Atao fahazarana ny manao aro vava orona, hajaina hatrany ny elanelana 1metatra, ny fanasana tanana dia atao fanao miaraka amin’ny savony.
Raha amin’izao fotoana izao no jerena dia efa betsaka ireo olona no tsy manaja tsara ny fanaovana ny arotava na aro vava orona nefa dia mifamezivezy eny rehetra eny, hita ihany koa izany eny an-tsena. Mila mitandrina isika amin’ny fiverenan’io aretina io. Tsy hadinoina fa telo no voan’izy io tany amboalohany no lasa an’anarivony. Tsy izay ihany fa nisy ihany koa ireo namoy ny ainy noho ity aretina ity.
Andraikitry ny tsirairay no mitandrina, sady miaro ny tenany no miaro ny hafa ihany koa. Sarobidy loatra manko ny fahasalamana. Sahirana isika raha mbola hiverina hihiboka indray. Mila ny fahendren’ny tsirairay mba hiarovana ny rehetra manoloana ity areti-mandoza ity.
Mipetraka hatrany n fanontaniana : mbola misy tokoa ve ny rafitra mpanara-maso eo anivon’ny fanjakana na ministeran’ny fahasalamana, na ministeran’ny fiarovam-pirenena, na ministera hafa na rafitra iarahan’ny ministera hafa. Mampanahy fa sao ho lasa tahaka ny olona matin’ny kere tany Atsimo indray izy ity. Efa maty ny olona vao hita fa nahia ampitoerana izay vao maty. Dia tsy nisy mpijery, tsy nisy nahita tao.
Mila takian’ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena mihitsy ny fangatahana ny fanohizana ny fanaraha-maso ka tokony ho ao anatin’izay ny solontenan’ny fiaraha monimpirenena. Miomana fa sao manao tampody fohy ny aretina.
Kmf/Cnoe sy ny Covishield : Manaitra ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny malagasy hihetsika - il y a 14 heures
20 Juin JMR : Généralités sur les réfugiés politiques d’ailleurs et d’ici - il y a 15 heures
Taratasin’ny mpamaky : Isaorana ireo mpitsabo mahafatra-po eny amin’ny CTC rehetra any - il y a 23 jours